"သဟဇာတ ဖြစ်စွာ အတူနေထိုင်ရေး ပညာပေး" ခရီးနီးပါ့မလား ? - News @ M-Media
“သဟဇာတ ဖြစ်စွာ အတူနေထိုင်ရေး ပညာပေး” ခရီးနီးပါ့မလား ?
in သူ့အမြင် — March 4, 2017
မတ်လ ၄ ၂၀၁၇
မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် သဟဇာတဖြစ်ရေးအတွက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့ စည်းများနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးပွဲ 30.3.2013 (ဓါတ်ပုံ-Myanmar Peace Center)
NGO တစ်ခုက ရေးသားထားပြီး အချို့ဒေသတွေ ဘုန်းတော်ကြီးသင်စာသင်ကျောင်းတွေမှာ pilot စမ်းသပ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ပြည်သူ့နီတိ သင်ရိုးသစ်ကို မြန်မာပြည် လက်ရှိအနေအထားမှာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုသူရော၊ မကြိုက်တဲ့သူ ကန့်ကွက်တဲ့သူတွေပါ ရှိမှာပါ။ အောင်မြင်ပါ့မလားတောင် စိုးရိမ်စရာ။
ပညာရေးလောကသား ကျောင်းဆရာတစ်ယောက် အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ သင်ရိုးတွေ လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် စင်္ကာပူ မူလတန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ လူမှုရေးဘာသာရပ်ရဲ့ သင်ခန်းစာက Our Neighbor ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအကြောင်း၊ သူတို့တွေ ဘာ လုပ်ကြတယ် … ဘယ်လို ပွဲလမ်းသဘင်တွေရှိတယ် … သူတို့ အခြေခံ ခံယူချက်က ဘာတွေ ဆိုတာကို ကာတွန်းလေးတွေ ပုံပြင်လေးတွေနဲ့ သင်ကြားပေးတာပါ။ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲအကြောင်း … တရုတ်လူမျိုးတို့ရဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာ စတာတွေ၊ ဟိန္ဓူတို့အကြောင်း … ဒီပါဝလီပွဲကို သွားလည်ကြတဲ့အကြောင်း စတာတွေ၊ ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ အခြေခံ ဓလေ့တွေ … ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကျင်းပပုံတွေ၊ ပြီးတော့ မွတ်စလင်မ်တို့ကြောင်း … ဥပုသ်လ ဝါကျွတ်အီးဒ်ပွဲတော်မှာ မုန့်စားကြတာတွေ အစရှိသည်ဖြင့် သင်ပေးတာပါ။ Social Harmony ဖြစ်စေရေးအတွက်ပါ။
အင်္ဂလန်ပညာရေးမှာ အခြေခံကတည်းက ဘာသာတရားများအကြောင်း လေ့လာသင်ယူခြင်းက ဘာသာရပ်တစ်ခု ပါ ပါတယ်။ ဘာသာတရားတွေ ထွန်းကားလာပုံ၊ ဘာသာတရားတို့ရဲ့ အခြေခံ ခံယူချက်တွေ၊ ဘာသာတရား အသီးသီး ပေါ်ထွန်းလာပြီးနောက် ဘယ်လိုဘယ်ပုံ အကျိုးရှိပုံတွေအကြောင်းကို လူမှုဗေဒဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပထဝီ သမိုင်းတို့ကိုပါ အခြေခံလို့ လေ့လာသင်ယူခွင့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ရခဲ့ကြတာပါ။ မူလတန်းက စလို့ အထက်တန်းအထိ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ ပါသလို တက္ကသိုလ်အဆင့်မှာလည်း ဆက် လေ့လာလို့ ရပါသေးတယ်။
ဂျပန် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာလည်း သင်ရကြောင်း၊ သူတို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းမှာ သင်ခဲ့ရလို့ ဘယ်ဘာသာတရားက ဘယ်လို ကျင့်သုံးကြတယ် ဆိုတာ သိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဂျပန် မိတ်ဆွေများ ပြောပြလို့ သိရပါတယ်။
ဘာသာရေးကို သင်ပေးနေတာမဟုတ်ပါ … ဘာသာတစ်ခုအကြောင်း သင်ပေးနေတာ မဟုတ်ပါ။ ဘာသာတရား ဆိုတာ ဒီလိုတွေ ရှိပါလား ဆိုတာရယ် .. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်နဲ့ မတူသူတွေအကြောင်း တစေ့တစောင်း သိခွင့်ရထားတာရယ် စတာတွေက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သဟဇာတ ဖြစ်စေရေးအတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်တွေပါ။
မဟုတ်လည်း ဒါတွေ ကြားရမှာပဲ … မဟုတ်မမှန် ပုံပျက်ပန်းပျက် ဖြစ်နေတဲ့ လိုရာပုံဖော်ထားတဲ့ အမှား တွေကို ကလေးတွေကို ပေးသိမလား … စနစ်တကျနဲ့ ကိုယ်စားပြုနိုင်တဲ့ (authentic ဖြစ်တဲ့) အရှိတရားကို ပေးသိမလား … ဘယ်ဟာက ပို သင့်တော်မလဲ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နုနယ်တဲ့ကလေးတွေကို အရောင်အဆင်း ကင်းမဲ့ပြီး အဖြူထည်လေးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်ရင် မှန်ကန်တဲ့ အသိ ပေးဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်။ မဟုတ်ရင် မိမိ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာအသီးသီးက ခေါင်းဆောင်များ ဆရာသမားများက ကိုယ့်ချင်းကိုယ် ပြောမယ့် ဝါဒမှိုင်းတိုက်ထားတဲ့ သူများမကောင်း ငါတို့ကောင်း၊ ငါတို့က အမြဲတမ်း ခံနေရ ဆိုတဲ့ မှိုင်း ဝင်ပါတယ် (ဘယ် ဘာသာဝင် မဆိုပါ။) ဒါမှမဟုတ်လည်း Facebook လို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ၊ တခြား မီဒီယာစုံမှာ ဖွသမျှ အဟုတ်ထင်ကြပါမယ်။ အဲဒါကို ရှောင်နိုင်ဖို့က ဘယ်ဘက်ကိုမှ ဘက်မလိုက်ဘဲ academic ဆန်ဆန် ပညာသင်ယူခြင်းကနေ ရနိုင်ပါမယ်။
နောက်တစ်ပိုင်းက ဒီအကြောင်းအရာတွေ ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာ ခုအစိုးရသစ်လက်ထက် မနေ့တနေ့ကမှ မဟုတ်ပါ။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှာ ပြည်တွင်းပဋိပက္ခအချို့ ဖြစ်အပြီးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် သဟဇာတဖြစ်ရေးအတွက် ဘာသာတရားအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေး ပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင်များ ပါဝင်တဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ရက် နေ့လယ် ၂နာရီက ရန်ကုန် Myanmar Peace Center ရုံးခန်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင် သဝဏ်လွှာပေးပို့၊ တက်ရောက်သူ ရဟန်းရှင်လူအားလုံး သဘောတူညီစွာနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့တာက ရေရှည်ကုစားနိုင်ရေးအတွက် စီမံချက်အနေနဲ့ မြန်မာပြည်က အခြေခံ ပညာသင်ခန်းစာ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှာ ဘာသာကြီးလေးခုအကြောင်း သဟဇာတဖြစ်စေမယ့် သင်ခန်းစာများကို သိမှတ်စရာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ထည့်သွင်းသင်ကြားဖို့ပါ။
အဲဒီကြေညာချက်ထဲက အမှတ် (၁၀)မှာ ဒီလို ပြောခဲ့တာပါ။
“(၁၀) ဘာသာပေါင်းစုံ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာပေး ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ကျောင်းသင်ခန်းစာများတွင် ထည့်သွင်းသင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူသည်။”
အဲဒီ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက ချခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း စမ်းသပ်စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်နေခဲ့တာပါ။
လက်ရှိ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်များကို ရေးဆွဲတဲ့ အဖွဲ့ကလည်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံတော် သမ္မတအကြံပေး ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ CDNH ဆိုတဲ့ “ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့် အမျိုးသားရေး သဟဇာတဖြစ်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာရေးအဖွဲ့” ကနေပါ။ သူတို့ နှစ်နဲ့ချီ သုတေသန လုပ်ထားတာကို အဆိုပြုတာပါ။
လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မလား ဆိုတာကိုတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။ ပညာရေးလောကသား တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ဖြစ်စေချင်မိပါတယ်။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခု လို့ ရိုးသားစွာ မြင်မိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် သဟဇာတဖြစ်ရေးအတွက် အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဘာသာပေါင်းစုံဆွေးနွေးပွဲ ပူးတွဲကြေညာချက် Link
အကြောက်တရား နဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေတာ NLD အတွက်ရော တိုင်းပြည်အတွက်ရော မကောင်းပါ။ (Jul 1, 2016)
တရားဥပဒေဟာ လူမျိုး ဘာသာ ခွဲသလား (Jun 30, 2016)
ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး စုပေါင်း ဝါဖြေပွဲ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ ရေတွင်းကုန်းမှာ ကျင်းပမည် (Jun 14, 2016)
ကိုယ့်ဘာသာတရားကို ချစ်ပါ၊ တခြားဘာသာတွေကိုလည်း လေးစားပါ (May 25, 2016)
“နှုတ်ဆိတ်နေမှုဟာ သစ္စာဖောက်ခြင်းပဲဆိုတဲ့ အချိန်ကို ရောက်လာပါပြီ။” (Apr 26, 2016)
`တိုင်းရင်းသားတိုင်း နိုင်​ငံသားလား´ (Apr 16, 2016)
တိုင်းပြည်ကို မောင်းနှင်မယ့် ဒရိုင်ဘာ (Mar 10, 2016)
“ကျားမြီးဆွဲ ဘာနီဆန်းဒါးနဲ့ တဇောက်ကန်း ဒေါ်နယ်ထရန့်” (သို့မဟုတ်) “အမေရိကန် အနာဂတ်နေ့သစ်ဆီသို့ လမ်းသစ်ထွင်ကြမယ့် လူနှစ်ဦး” (Feb 12, 2016)
ဘာသာပေါင်းစုံလှုပ်ရှားမှုများဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ခြင်း (Feb 7, 2016)
မဟာတမန်တော်နေ့ အထိမ်းအမှတ် ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေး အခမ်းအနား စစ်ကိုင်း တွင် ပထမအကြိမ် ကျင်းပ (Dec 30, 2015)
Tags: CDNH, opinion, Social Harmony
Categories Select Category Advertising (5) Dubai (1) EDITORIAL (14) English Version (45) M-Media Blog (113) ကဗျာ (77) အစ္စလာမ်အေးရိပ် ဆာယာသို့ (18) M-Media Movies Guide (2) M-Media စာအုပ်စင် (23) M-MediaNewsLetters (15) Media To Monitor (116) Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး (26) ပြည်တွင်း (26) Our Perspectives (95) Uncategorized (2) ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ (19) ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ (266) ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ (211) ထူးချွန်လူငယ် (16) ရဲဘော်ကိုထွေး (6) ဦးရာဇတ် (23) ပညာရေး (91) မိုးလေ၀သ (4) ရင်ဖွင့်လွှာ (3) သတင်းများ (14,584) Analysis (7) Interview (146) Weekly News (2) ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ (1,204) ကာတွန်း (50) ဓါတ်ပုံသတင်း (92) ရုပ်သံသတင်း (62) သတင်းသုံးသပ်ချက် (2) သတင်းဆောင်းပါး (134) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (401) သူ့အမြင် (217) အားကစား (2,483) ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် (17) ပြည်သူ့အသံ (23) မြန်မာသတင်း (3,681) နိုင်ငံတကာသတင်း (6,814) အာဖရိက (328) အာရှ-ပဖိဖိတ် (1,777) အမေရိက (777) အရှေ့အလယ်ပိုင်း (1,485) ဥရောပ (752) သုတ၊ရသနှင့်အထွေထွေ (1,373) Essay (1) M-Media Knowledge (24) Quote (16) ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ (127) ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ (29) ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် (6) စာတမ်း (5) ဘာသာပြန် (161) ရသစာပေ (4) ဝတ္ထုတို (6) သုတ၊ရသ (56) သရော်စာ (29) ဆောင်းပါး (869) ထွေရာလေးပါး (84) ပေးစာ/ပြန်စာကဏ္ဍ (26) ကြေငြာချက် (59) နှလုံးသားအာဟာရ (29) သူတို့ပြောသမျှ သူတို့အကြောင်း (2) အမှားပြင်ဆင်ချက် (2) အနုပညာ (2) မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်း (52) Kaman (1) Masjid In Myanmar (1) သမိုင်းထဲက ပုံရိပ် (17)